Yan Aung: November 2009
Blogcation Declared.... :)
ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ရေးတာကို ခဏနားဦးမယ်လို့ ခွင့်တောင်းတာပါ.
သိပ်တော့ မကြာပါဘူး. တစ်လလောက်ပါပဲ.
စိတ်တော့မပူကြပါနဲ့. ဘာစိတ်အနှောင့်အယှက်မှ မရှိပါဘူး. ဘယ်သူကမှလည်း ကျွန်တော့်ကို အာရုံစားအောင်၊ လုပ်လက်စအလုပ်တွေ ရပ်တန့်သွားနိုင်လောက်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိသေးပါဘူး.
ကျွန်တော့်အလုပ်တွေပေါ်ကို အာရုံစူးစိုက်ချင်ရုံ သက်သက်ပါပဲ.
အားလုံးပဲ နောက်များကျမှပဲ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့....
ချစ်ခြင်းရဲ့ အမိန့်ပေးရန် မ၀ံ့ကြောင်းပါ
ဆင်ခြင်မှုတရားတွေ အကျွန့်ထံမှာ ဆိတ်သုဉ်းပြီ
အရာရာကို ရှင်းပြစွမ်းမယ်... ယုံနေ...
ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ "ကြိုးလျော့နေသော ဂစ်တာ" ဆိုတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို နုရွလှပတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်အဖြစ် ခံစားကြည့်မိတာပါ....
အခုလို တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ အခါသမယမှာ ကျီးမနိုးပွဲ ဆင်နွှဲကြ၊ တန်ဆောင်တိုင် အခါသမယကို ရင်ခုန်ယစ်မူးကြ၊ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲခင်းတန်းတွေမှာ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းနဲ့ ပြုံးပန်းဆင်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်.း)
ဘ၀တစ်ခုကို ကျရာနေရာမှာ အဆင်ပြေသလို ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ ရှိနေရတဲ့ ကျွန်တော်အတွက်တော့
ရွှေစေတီကြီး၊ အသီးသီးတည့်၊ ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊ လျှပ်ရောင်တန်းမျှ၊ ရွှေနန်းရွှေဘုံ၊ အလုံးစုံကို၊ အာရုံမျက်မြင်၊ ဖူးမျှော်ချင်၍၊ သည်တွင်ရွှေမြို့၊ သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း၊ ဖြောင့်တန်းတော့မည်၊ စိတ်ကရည်သည်၊
လို့သာ မဲဇာတောင်ခြေရတုလေးကို ရွတ်ဆိုရင်း ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ကို ထွန်းညှိလို့ လပြည့်တန်ဆောင်တိုင် အခါသမယကို ကြိုဆိုခဲ့ရပါငဲ့...
ဘာကြောင့်ရယ်မသိဘူး. ခုတလော မြန်မာပြည်ကြီးကို တော်တော်လေး လွမ်းဆွတ်နေမိတယ်ဗျာ...
နောက်နှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်းကျရင်တော့ မောင်ဖုန်းလာခဲ့တော့မယ်... လို့သာ ဒီည ဒိုင်ယာရီမှာ တို့ထိလိုက်မိပါကြောင်း....
ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဒီအချိန် ရေဒီယိုက သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို မကြာခဏလွှင့်ထုတ်ပေးတတ်တယ်.
"မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လတန်ဆောင်တိုင်.... ကထိန်ပွဲ ခင်းပါတဲ့ လတန်ဆောင်တိုင်....
မြူးးးးးးးးး... မြူးးးးးးးးး မောင်ခေါ်ရင် မယ်ထူးလေ... မယ်ခေါ်ရင် မောင်ထူးပါမယ်လေ..."
အဲလေ... ရေးရင်းနဲ့ စာသားတွေ ရောကုန်ပြီ. ဟတ်ဟတ်..
ပြီးတော့ တန်ဆောင်တိုင်ဆိုတာ သီတင်းကျွတ်ပြီးရင် လာတတ်တာ မဟုတ်လားးးး (ဟုတ်တယ်ဟုတ်. အမှန်တရားတွေနော်. အဟတ်ဟတ်)
ဩော်... ဆိုလိုတာက သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းတယ်. ဗျောက်ဖောက်တယ်. မီးပုံးထွန်းတယ်. မီးပုံးကားလေးတွေ တွန်းတယ်. ဆွဲတယ်. ဟော... ပြီးလည်းပြီးရော တန်ဆောင်တိုင်တဲ့ဗျာ... ဆီမီးတစ်ထောင်၊ နှစ်ထောင်၊ ငါးထောင်၊ ကိုးထောင် ထွန်းညှိပွဲတွေ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ကြ၊ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်တွေ ခင်းကျင်းဆင်ယင်ကြ၊ ပျော်ကြ၊ ရွှင်ကြ၊ ကကြ၊ ခုန်ကြ၊ လူကြီးသူမတွေကို ကန်တော့ကြ၊ မုန့်ဖိုးတွေ တောင်းကြနဲ့....
ကျွန်တော် သိပ်ကို သတိရမိပါတယ်....
မိတ္ထီလာမှာနေတုန်းကဆို ပထမလမ်းမတော်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ပေါ့. သူက ရွှေအုန်းပင် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတယ်. အဲဒီ့အိမ်မှာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ညဆို ဘာလုပ်တယ်မှတ်လဲ..
လူတွေကလည်း သိနေကြတော့ နှစ်တိုင်း အဲဒီ့အချိန်ဆို အဲဒီ့အိမ်ရှေ့မှာ အများကြီးပဲ စောင့်နေကြတယ်.
ညဖက် မိုးနည်းနည်းချုပ်ရော အဲဒီ့အိမ်က လူတွေ သူတို့ အိမ်တံခါးတွေကို သော့တွေ အထပ်ထပ်ခတ်ပါတယ်. တံခါးတွေပိတ်ပါတယ်. ပြီးလည်းပြီးရော အပေါ်ထပ်ကို တက်ပြီး အပေါ်ထပ်ကနေ ဖလားကြီးတွေ သုံးလေးလုံးလောက်ကိုင်လို့ မိသားစုတွေ ပိုက်ဆံကြဲချပါတယ်.
လူအုပ်ကြီးက ဝေးးးးးးးးးး ခနဲအော်... ကျွန်တော်ကတော့ မလုရဲလို့ ဘေးဖက်ကနေ စက်ဘီးလေးဒေါက်ထောက်ပြီး အသည်းတအေးအေးနဲ့ မျှော်... အသပြာတွေ အသပြာတွေကလည်း ဝေါခနဲဝေါခနဲ ကြဲချလေသနော်... (Rap သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရော....)
စကားမစပ်. အဲဒီ့အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်က တော်တော်လေးလှတယ်ဗျ. ကျွန်တော့်ထက်တော့ ကြီးတာပေါ့.
သူတို့အားလုံး ပိုက်ဆံကြဲနေတာကို ပိုက်ဆံမကောက်ဘဲ သမီးချောလေးကို ငန်းတဲ့သူတွေကလည်း ရှိသေး...
ကျွန်တော်မငန်းပါဘူး. ကျွန်တော်က ဂျန်းတဲလ်မင်းလိုပဲ ရှိုးတာပါ. ဟတ်ဟတ်..
ပြောသာပြောတာပါ. သူမကတော့ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို သိပုံတောင်မထင်ပါဘူး
"ကျွန်တော့်ကိုသနားလို့တဲ့.... ပေါက်ပေါက်တွေတောင် ပြိုကျလာလိုက်တာ... ဝေါ..... ခနဲပဲ.."
ပိုက်ဆံကြဲတာမှာ ပါလာတဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေ ကျွန်တော့်ကို လာမှန်တာကို ပြောတာပါ. ဟတ်ဟတ်..
ခုတော့လေ... တစိမ်းတွေလိုပါပဲလေ... ဘယ်တုန်းကမှလည်း မသိခဲ့ပါဘူး...
ကျွန်တော်တို့တွေ လူပျိုပေါက်ဖြစ်လာတော့ အရပ်တွေ ရှည်ထွက်စပြုလာပါတယ်. (ဟုတ်. ကျွန်တော်အမှန်တွေပဲ ပြောပါမယ်. လပြည့်ညဖြစ်နေလို့ပါ. ဟတ်ဟတ်)
အဲဒီ့မှာတင် သောင်းကျန်းချင်စိတ်လေးက အစပြုလာပါလေရော...
ကျီးမနိုးပွဲညမှာဆို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ...
ဒီဖက်ကုန်စုံဆိုင်က ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖြုတ်( ဖြုတ်လို့ရတာတွေပေါ့နော်)ပြီးတော့ ဟိုဖက် စက်ဘီးပြင်ဆိုင်မှာ သွားချိတ်၊ အဲလိုတွေလုပ်ချင်လုပ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ချောင်ကြိုချောင်ကြားမှာ ဖွက်ထားမယ်ထင်ရတတ်တဲ့ ပံ့သကူပိုက်ဆံလေးတွေကို လိုက်ရှာနဲ့ပေါ့... အဲဒါလည်း လိုက်သာရှာရတာ. လန့်နေရတယ်. မတော်လို့ မြွေခွေနေတဲ့ ချောင်ကြိုချောင်ကြား သွားနှိုက်မိခါမှ လားလား... ကိုယ်တိုင်ပဲ ပံ့သကူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဟရို့...
မနက်ခင်းမိုးလင်းတော့ ဆိုင်ရှင်တွေ ဗျာများနေတဲ့ပုံကို ဒီဖက်ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ တီးလေး တစိမ့်စိမ့်သောက်ပြီး အရသာခံကြည့်၊ နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့ ၀ါးလုံးကွဲရီ....
ဟော... သဘာဝတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ ပုထုဇဉ်လူသားများ ဖြစ်ပေတော့လည်း အရွယ်ရောက်လာတော့ အမြီးလေးက ပေါက်လာပါလေရော...
အဲဒီ့အမြီးလေးက တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်မတိုင်ခင်ကတည်းက ဘွတ်ကင်ရိုက်ထားပါတယ်.
"သူနော်... အဲဒီ့နေ့ ဘာရှုတင်မှ လက်မခံနဲ့... အဲလေ... ဘယ်ကျောင်းသားမှ စာမသင်နဲ့. တို့နဲ့ပဲ နေပေးပါ. ပလိစ်..." တဲ့လေ...
အင်းပေ့ါလေ... ကျွန်တော်တို့လို ယောင်္ကျားဘသားတွေကလည်း ကြမ်းကြမ်းပြောရင်သာ ပြန်ကြမ်းချင်ကြမ်းမယ်. အနုလေးနဲ့ သူရယ်. ကိုရယ် ဆိုရင် လူက သာခွေယိုင်ဖြစ်ပြီးသားကို...
"Your wish is my command, baby! " လို့ဆိုတော့ သူက
"သွား... လူကြီးကိုကတဲ့... သွားးး မချစ်ဘူးတဲ့... "
အဲ... ဆက်ပြောရဦးမှာနော်. မေ့သွားလို့...
အဲဒီလိုနဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညကြီးက မမှာမကြား မချိန်းထားဘဲ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကြီးကို တည့်တည့်ကြီး လာမှန်ပါတော့တယ်.
အဲဒီ့လို မှန်တဲ့နေ့က ကျွန်တော်နဲ့သူမ ကားဂိတ်မှာ ငြင်းခုန်နေကြတာပေါ့..
"ဟာ... ကြိုမ၀ယ်ထားမိဘူး... ဒီနေ့သွားကြည့်ရင် မှောင်ခိုပဲ မိလိမ့်မယ်... အာဇာနည်နေ့ကလည်း ၈၀၀ ကုန်ထားပြီးပြီလေ."
"ဟွန့်... အဲဒါပဲ ခဏခဏလာပြောနေတယ်... မသိဘူး. ဒီနေ့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မယ်."
"ဟဲဟဲ... မ က ဘာလုပ်ချင်လို့လဲဟင်..."
"ဟွန်းး ရုပ်ကိုက... မသိဘူးမသိဘူး... ကြည့်ချင်တာမပြရင် ပြတာပဲ ကြည့်တော့မယ်..."
"အာ... ရှုပ်ကုန်ပြီ... မသိတော့ဘူးကွာ... တိုက်ကားသွားစီးမယ်...ဒါပဲ..."
ဘယ်တွေမှာရှိလဲဆိုတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဖက်မုခ်က ဟက်ပီးဝေါလ်၊ ဟိုးးး မြကျွန်းသာ၊ ပြီးတော့ ပြီးတော့....အင်း... သီရိမင်္ဂလာဈေးအပေါ်ထပ်မှာလည်း ရှိသေးတယ်...
အမြန်ဆုံး ချက်ချက်ချက် လုပ်လိုက်တော့ နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်နဲ့ အနီးဆုံး၊ အဆင်ပြေဆုံး ခရီးစဉ်က သီရိမင်္ဂလာဈေးဖြစ်နေတယ်...
"အိုကေ... မ... သီရိမင်္ဂလာဈေးသွားမယ်..."
"ဘာပြောတယ်.... လပြည့်နေ့ကြီးကို ဈေးသွားပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ... "
ခေါင်းကို တခါခါရမ်းပြီး သူမ စိတ်လေသွားပုံပေါက်ပါတယ်..
"ဩော်... မ ကလည်း... ဈေးအပေါ်ထပ်မှာ တိုက်ကားသွားစီးမယ် ပြောတာပါ မရဲ့... "
"ဟင်းးဟင်းး မသိပါဘူး... ဈေးအောက်မှာပဲ လေးဘီးကားသွားစီးမယ်ထင်နေလို့.. ဟင်းဟင်းဟင်း..."
ဒီတစ်ခါ စိတ်လေရသူကတော့ ကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျာ....
နေဦးးး အင်းလို့မရသေးဘူး.. ဇာတ်လမ်းက ခုမှစတာ... ဟတ်ဟတ်ဟတ်
အဲဒီ့လိုနဲ့ အပေါ်ထပ်ကိုတက်၊ တိုက်ကားစီးတယ်ပေါ့ဗျာ.. ပြီးလည်းပြီးရော လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံက နည်းနည်း နည်းသွားပြီမဟုတ်လား.. ဒါပေမယ့် ပျော်ရတာက မ၀သေးဘူး..
ဟို ဂျောက်ဂျက် သီချင်းထဲကလိုပေါ့...
"အိတ်ကပ်ထဲမှာကြည့်တော့ ၁၀၀ တန် ၅၀ တန် ၁၀ တန် ပေါင်း ၁၆၀... ဒါနဲ့ ဘာဝယ်သောက်မလဲ... ပရိသတ်ရှေ့မှောက်ဝယ်... နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့..." ဆိုပြီး ညစ်နေခိုက်မှာ သူမက အကြံပေးပါတယ်.
ကျွန်တော်လည်း ပုခုံးကို ဟောလိဝုဒ်မင်းသားစတိုင်လ် ဟန်ပါပါနဲ့ တွန့်ပြလိုက်ပြီး
"၀ှိုင်း" လို့ ပြန်မေးလိုက်တာပေါ့...
သူမက ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲလို့ ငါးမျှားကန်လေးဘေးကို ခေါ်သွားပါတယ်.
"ဒီလိုရှိတယ် မောင်ရဲ့.... ဒီ ငါးမျှားတံလေးမှာ သံလိုက်ပါတယ်. ဟို ရေထဲက ငါးပုံစံ ဗူးလေးတွေကလည်း သံနဲ့လုပ်ထားတယ်. အဲဒါလေးတွေကို လိုက်မျှားပြီးရင် ရလာတဲ့ ငါးလေးကို ဗူးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်၊ အထဲမှာ ကံစမ်းမဲလေးတွေပါတယ်. အဆင်ပြေရင် နောက်တစ်ခေါက် တိုက်ကားစီးလို့ရတာပေါ့. မဟုတ်ဘူးလား. It's fun, Mg!!!!"
အဲသလို မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးနဲ့ အားတက်သရောရှင်းပြလေတော့ ကျွန်တော်လည်း ဇီးကွက်ပြူးပြူးပြပြီး အိုခေ.. ရက်စ်လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်.
ငါးပြာပြာလေးတစ်ကောင်မိတယ်. သူမကို ပေးလိုက်တယ်.
သူမ ဖွင့်ကြည့်တယ်. နှာခေါင်းရှုံ့ပြတယ်.
အိုကေ... I got it!
သူမအလှည့်. ငါးအစိမ်းလေးတစ်ကောင် ထပ်မိတယ်.
သူမ ကျွန်တော့်နားကို ကပ်လာတယ်...
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လက်ဖမိုးလေးပေါ်ကို သူမလက်ကလေးနဲ့ အုပ်ပြီး လာကိုင်တယ်.
ပြီးတော့ ခပ်တိုးတိုးလေး ကျွန်တော့်နားကပ်လို့ ရင်ခုန်နေတဲ့အသံလေးနဲ့ ဘာပြောလဲသိလား...
"ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးအခေါက်ပဲနော်... မောင်" တဲ့
ကျွန်တော့်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ ငါးမျှားတံတောင် လွတ်ကျသွားမလို့ ကံကောင်းတယ်. သူမ ၀င်ကိုင်ထားပေးလို့သာပဲပေါ့...
ခုတော့လည်း ကျွန်တော့်လက်ဖမိုးတွေ နေရောင်အောက်မှာ ပြောင်လက်တောက်ပနေခဲ့ရပြီပေါ့လေ. (ချွေးထွက်လို့ပါ. ဟတ်ဟတ်)
နှစ်ယောက်သား ရင်ခုန်တိမ်းမူးစွာနဲ့ အထဲက မဲလိပ်ကလေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်.
Ohhhhhh.... My.... Goddddd
သူမလည်း ခုန် ကျွန်တော်လည်း တုန်... (ရင်တုန်တာကိုပြောတာပါ)...
၀မ်းသာအားရနဲ့ သရဲရထား Booth လေးဆီကို သူမလက်ကလေးကို ဆွဲလို့ပြေးလွှား၊ လက်မှတ်လေးကမ်းပေးလိုက်တော့ အရောင်းစာရေးမလေးက အကဲခတ်သလို လှမ်းကြည့်ရင်းပြောတယ်...
"ကိုကြီး သိပ်ကံကောင်းတယ်. အဲဒါမျိုး တစ်ထောင်မှာ တစ်ယောက်ပေါက်ခဲတယ်."
ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဟိုးသီရိမင်္ဂလာဈေးအပေါ်ထပ်ကို ပြေးဆောင့်တယ်. သူမက ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းဆွဲထားပေလို့သာပေါ့...
ကျွီကျွီ...ကျွီ..ကျွီနဲ့ အထဲကို လှိမ့်ကာလှိမ့်ကာဝင်သွားတဲ့ ရထားတွဲလေးပေါ်မှာ သူမရယ်လေ. ကျွန်တော့်နားကို ခါတိုင်းထက်ပိုကပ်ထိုင်လို့လက်မောင်းကို ဆွဲထားတယ်.
ဒါတောင် ထိုင်ခုံတွေက တစ်ယောက်ထိုင်တွေဖြစ်နေလှုိ့ပဲ. မဟုတ်ရင် ကျွန်တော့်ပေါ်လာတက်ထိုင်မလားမသိ... အဲဒီ့အခါကျရင် ရထားလည်း ရွေ့တော့မှာမဟုတ်... ဟတ်ဟတ်..
ဦးကျောက်လုံးအသံနဲ့ သရဲတစ်ကောင် ပုဆိန်ကြီးကိုင်လို့ ပြေးလာပါတယ်.
သူမ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းလေးလာဖွက်ပါတယ်.
နောက်တစ်ကောင် ဟိုး အပေါ်ကနေ ရွှီးခနဲ ၀တ်စုံဖြူကြီး ၀တ်လို့ ဆင်းလာပါတယ်.
သူမကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်လုံးကို လှမ်းဆွဲဖက်ပြီး... 'လုပ်ပါဦး... မောင်...' တဲ့...
သရဲမကြီးကို မော့ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်.
ပြီးတော့ ကြောက်နေမယ့်သူမကို အားပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်.
'မ... သိလား.. သရဲမကြီးက ဘော်လီမ၀တ်ထားဘူး..'
သူမရယ်လေ... ကျွန်တော့်ပေါင်ကို ဆွဲလိမ်လိုက်တာများ အရှိုးရာကို ထင်ရော.. ဗီဇာဝင်တော့တောင် ကောင်ဆယ်လာကမေးသေးတယ်. လတ်တလော ဆေးကုသခံနေရတဲ့ ရောဂါဘယတွေရှိလားဆိုတော့. ကျွန်တော်ရယ်လေ. ပြမိတော့မလို့... ဟင်းဟင်းဟင်း...နော်..
နောက်ကျတော့ မှင်စာပေါက်စလေးတွေ၊ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေ၊ အလောင်းကောင်ကြီးတွေ၊ လွှနဲ့တိုက်ဖြတ်ပြနေတာတွေ၊ ဂျပန်သရဲလို မျက်နှာဖြူဖြူကြီးနဲ့ ဟိုးချောင်ကနေ ချောင်းကြည့်နေတာတွေ....
အိုးးးး စုံလို့ စုံလို့ပါပဲဗျာ...
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီသရဲရထားကို ဘယ်လိုများဆောက်ထားလဲ... သရဲတစ်ကောင်က ကိုယ်စီးလာတဲ့ ရထားနားကို ဘယ်လောက်အကွာအဝေးထိ နီးကပ်လာအောင် လုပ်ထားသလဲ... ဒီသရဲကို စက်သီးနဲ့မောင်းတာလား၊ ကြိုးနဲ့ဆွဲတာလား၊ မော်တာနဲ့လှည့်ထားတာလား... စသည်ဖြင့် တွေးတောကြံဆနေချိန် ရင်ခုန်သံနှစ်ခုဟာ တစ်သားတည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်....
"အရမ်းကြောက်တာပဲ မောင်ရယ်..." တဲ့
ကျွန်တော်ကလည်း သွားတက်လေးဖွေးခနဲ ပေါ်အောင် ပြုံးပြလိုက်ပြီး...
"သရဲကို ကြောက်တာလား. မောင့်ကို ကြောက်တာလားးး" ဆိုတော့
"ဟွန့်.... လူကြီးကိုက..." တဲ့လေ...
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော်အဆင်ပြေခဲ့သလောက် သရဲတွေတော့ စိတ်လေပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်...
ဟိုသရဲတစ်ကောင်ဆို စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အမောတောင်ဖောက်သွားတယ်ဆိုပဲ... ဟတ်ဟတ်ဟတ်..
နောက်နှစ်ခါ တန်ဆောင်းမုန်းတော့ မောင်ဖုန်း ပြန်ခဲ့တော့မယ်ကွယ် လို့သာ ဒီည ဒိုင်ယာရီမှာ စာရင်းလေး တို့ထိလိုက်ရပါကြောင်း...